पुरुष गन्धमा यसरी आकर्षित हुँदा रहेछन महिला, पुरुष गन्धले महिलाको मुड नै परिवर्तन | Rajmarga
एउटा नयाँ शोधका अनुसार महिलाहरु पुरुषको पसिनाको गन्ध आकर्षित छन् वा छैनन् भन्ने कुरा थाहा हुने पत्ता लागेको छ। शोधबाट पुरुषको पसिनाको गन्ध उनीहरुको मुडअनुसार परिवर्तन हुनेसमेत खुलासा भएको छ।
टेलिग्राफमा प्रकाशित समाचारअनुसार महिलाहरु पुरुषको पसिनाको गन्ध सुघेर पुरुष कस्तो मुडमा छन् भन्ने कुरा थाहा पाउने गर्दछन्।
यो शोधमा २० वर्ष उमेर समूहका १९ जना महिलालाई पुरुषको पसिनाको दुई नमुना सुघाइएको थियो। यसमध्ये एउटा नमुना सामान्य र अर्को कामोत्तेजक समयको थियो । मसिनाको यो नमुना केही चुनिएका व्यक्तिहरुबाट लिइएको थियो।
सामान्य पसिनाको नमुना त्यतिबेला लिइएको थियो जब पुरुषलाई एउटा शैक्षिक भिडियो देखाइएको थियो । अर्को नमूना कामोत्तेजक पसिना जम्मा गर्नका लागि पुरुषलाई २० मिनेटसम्म कामोत्तेजक भिडियो देखाइएको थियो।
जतिबेला शोधमा सहभागी महिलालाई पसिनाको नमुना सुघाइयो त्यतिबेला शोधकर्ताहरुले ती महिलाहरुको दिमागमा चलिरहेको गतिविधिमा नजर राखिरहेका थिए । यद्यपि ती महिलाहरुले त्यो महशुस गरेनन् तर उनीहरुको दिमागले पसिनाको मात्र होइन भिन्न नमूना पहिचानसमेत गरे र त्यसमाथि प्रतिक्रियासमेत जनाए।
यस विषयमा शोध गरिरहेका टेक्सासको राइस विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानका प्राध्यापक डा. डेनिस चेनका अनुसार कामोत्तेजक पसिनाले महिलाहरुको दिमागको भिन्न भागलाई सक्रिय गरायो । यो शोधको परिणामबाट महिलाको दिमाग आफूप्रति आकर्षित हुने पुरुषको पसिनालाई पहिचान गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने पत्ता लागेको छ । एजेन्सी
Previous post: सेक्सः बढीमा मात्र १३ मिनेट पर्याप्त !
Next post: धनी भए नेपाली: नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो